Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPod shaandheyn si Lugood | Bedelka Songs in Lugood ka shaandheeyn lagu iPod
Ma jiraan hab lagu wareejiyo music on my iPod isku shaandheyn ku Bilowgii 3 si Lugood on my computer? Waxaan ka cabsi qabaa in ay isku dayaan syncing sababtoo ah waxaan qabaa in uu yahay habka a dambe halkaas oo music ee Lugood waxaa loo wareejiyey iPod ah. Ma doonayo in masixi music on iPod ah. Thanks.
Ma doonaysaa in lagu wareejiyo music ka iPod shaandheyn si Lugood dib markii maktabadda Lugood aad ku waayi? Damacsan tahay in ay gurmad on iPodc music isku shaandheyn si Lugood? Si kastaba ha ahaatee, sida barnaamijka hal jid, Lugood syncs kaliya music aad shaandheeyn lagu iPod. Wax si ay u gudbiyaan music aad iPod, waxa uu samayn karaa.
Xaaladdan oo kale, waxaan aad ugu boorinayna in aad isticmaasho ah iPod in Lugood kala iibsiga qalab si sahlan loo isticmaalo oo awood leh - TunesGo Wondershare ama Wondershare TunesGo (Mac) . Sidaa daraadeed, waxaad tahay inay awoodaan inay si fudud oo dhaqso u gudbiyaan oo dhan ama songs soo xulay shaandheeyn lagu iPod in Lugood. Ka sokow wareejinta music, waxa kale oo aad nuqul ka kartaa filimada, playlists, podcast, TV show, videos music, iyo buugaag maqal ah maktabadda Lugood aad sidoo kale. Intaa waxaa dheer, oo dhan music daray hore aan la qaadi doonin inta lagu jiro suuqa kala iibsiga music ah.
Riix ah "Download" badhanka soo bixi TunesGo Wondershare on your computer.
Tallaabooyinka fudud in aad nuqulka music ka iPod shaandheeyn in Lugood
Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fudud oo ku saabsan files music wareejinta iyo playlists ka iPod shaandheyn si Lugood. Hadda, bal aynu hubi iyaga.
Tallaabada 1. Run barnaamijkan iyo in ay ku xirmaan iPod shaandheeyn lagu la PC
First of dhan, rakibi oo kadibna tan iPod in Lugood kala iibsiga qalab aad kombuutarka. Haddii aadan ku rakiban Lugood on your computer, barnaamijkan idin xusuusin doonaa waxa ku rakibidda. Sidaas darteed, haddii ay taasi, waa in aad soo dajiyo Lugood on your computer.
Markaas, xiriiriyaan shaandheeyn lagu iPod la your computer via cable USB ah. Barnaamijkan wuxuu isla markiiba lagu ogaan doonaa shaandheeyn lagu iPod. Markaas, interface ugu weyn ee la soo bandhigi doonaa shaashadda PC. Laga soo bilaabo safka tegey this interface ugu weyn, waxaad ka arki kartaa waxyaabaha ku saabsan shaandheeyn lagu iPod.
Tallaabada 2. dhaqaaq music ka iPod shaandheeyn in Lugood
Si aad u hagaagsan music ka shaandheeyn lagu iPod in Lugood, waxaad riixi kartaa "Si Lugood"> "Start" ee khadka hoose ayaa ku interface ugu weyn. Markaas, ka saar marks ka hor marka laga reebo music iyo playlists warbaahinta kale. Guji "nuqul Lugood". Waxaa songs maktabadda Lugood aad wareejin doonaa.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo si buuxda u la jaan qaada iPod shaandheyn 4, iPod shaandheyn 3, iPod shaandheyn 2, iyo iPod shaandheyn 1.
Waxa kale oo aad u guuri kartaa heeso maktabadda Lugood aad hab kale. On column ka tegey, waa in aad ku dhufo "Media". Markaas suuqa kala warbaahinta lagu soo bandhigi doonaa oo Midigta. Dooro heeso aad doonayay. Ka dib markii in, guji saddexagalka rogay hoos "Dhoofinta in". Marka liiska la jiido-hoos u soo booda, waa in aad doorato "Dhoofinta in Lugood Library".
Ama waxaad riixi kartaa oo kaliya "Smart dhoofinta in Lugood". Tani waxay aad u siidaysay ka dhoofinta isla heesahaaga Lugood si joogta ah.
Haddii aad rabto in aad nuqul ka dib maktabadda Lugood playlists, yuo riixi kartaa "playlist". Ka dib markii xulashada playlists aad jeceshahay, waxaa idinku waajib ah in guji saddexagalka hoos "Dhoofinta in". Dooro "Dhoofinta in Lugood Library".
Video Tutorial Sidee si ay u gudbiyaan Music ka shaandheeyn lagu iPod in Lugood
> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Music ka shaandheeyn lagu iPod in Lugood